"Dia hoy izaho: Tsy hanonona Azy aho na hiteny intsony amin’ ny anarany. Nefa izany dia tonga toy ny afo mirehitra ato am-poko, voahidy ato amin’ ny taolako; ary sasatra ny niaritra aho ka tsy mahazaka." Jer. 20 : 9
Hampiasain'Andriamanitra mba hilaza ny hafatry ny fahamarinana ankehitriny ireo olona manana fanetren-tena. Maro ireo olona, hita mirohotra sy maika, etsy sy eroa, teren'ny Fanahin'Andriamanitra hizara fahazavana ho an'ireo olona any amin'ny haizina. Toy ny afo ao amin'ny taolany ny fahamarinana, mameno faniriana miredareda ao anatin'izy ireo hanazava ireo olona mitoetra ao anaty haizina. Maro ireo olona hanambara ny tenin'i Jehôvah, na dia amin'ireo olona tsy nandia fianarana aza. Teren'ny Fanahy Masina ny ankizy mba handeha hilaza ny hafatry ny lanitra. Hirotsaka ao amin'ireo izay manaiky ny fampaherezana ataony ny Fanahy Masina. Hiala amin'ireo lalana mangejan'ny olombelona sy ireo fihetsiny feno fitandritandremana izy ireo, ary hanatevin-daharana ny tafiky ny Tompo.
Amin'ny fotoana ho avy, ho voatariky ny Fanahin'ny Tompo ireo olona avy amin'ny sokajin'olona tsotra handao ny asany andavanandro izy ireny ka handeha hitory ny hafatry ny famindrampo farany. Haingana, araka izay azo atao ny tokonv hahavonona azy ireo hiasa, mba ho fahombiazana no ho vokatry ny ezaka ataony. Miara-miasa amin'ireo iraky ny lanitra izy ireo, satria izy ireo vonona ny hahafoy tena sy fotoana ary hampiasaina amin'ny asa fanompoana ny Tompo. Tsy misy olona mahazo alalana hanakana ireo mpiasa ireo. Atolotra azy ireo ny firariantsoa raha handeha hanatanteraka ny iraka lehibe nampanaovin'i Jesôsy izy ireo. Tsy tokony hisy teny mahery atao amin'izy ireo, any amin'ny toerana sarotra halehany, izav hamafazan'ny ny voan'ny filazantsara.
Ny zavatra tsara indrindra eo amin'ny fiainana izay tsy azo vidina na amidy dia - fahatsorana, fahatokiana tanteraka, fahamarinana, fahadioavana, fahitsiana tsy voaloto; maimaimpoana ireo na ho an'ny olona tsy nandia fianarana na ho an'ny olona nandia fianarana, na ho an'ny olona mainty hoditra na ho an'ny olona fotsy hôditra, na ho an'ny tantsaha manana fanetrentena na ho an'ny Mpanjaka eo amin'ny seza fiandrianany. Ny mpiasa manetry tena, izay tsy miantehitra amin'ny herin'ny tenany fa miasa amim-pahatsorana, sy amim-pahatokiana hatrany an'Andriamahitra, dia hiombom-pifaliana amin'ny Mpamonjy. Hitondra fanahy ho eo amin'ny hazo fijaliana ny vavaka maharitra nataon'izy ireo. Ho fiaraha-miasa amin'ny ezaka feno fahafoizan-tena ataon'izy ireo dia hanetsika fo maro i Jesôsy, hanatanteraka fahagagana eo amin'ny fiovam-ponhy fanahy. Ho tafangona ao anatin'ny fifankatiavana ao ampiangonana ny lehilahy sy ny vehivavy maro. Maro ireo trano fanaovana fivoriam-bavaka haorina, ary maro ireo sekoly hatsangana. Ho feno hafaliana ny fon'ireo mpiasa rehefa mahita ny famonjen'Andriamanitra. - TFC, b. 7, tt. 26-28